Waa immisa tirada hubka kiimikada ee Dunida ku sugan maanta ? – Kasmo Newspaper
Updated - April 11, 2018 4:05 pm GMT
London (Kasmo), Ciidammada rasmiga ah ee Suuriya waxaa lagu eedeynayaa isticmaalka hub kiimiko ah, duqayntii Sabtidii iyo Axaddii la soo dhaafay, agagaarka Dimishiq, goob ay ka taliso fallaagada oo 100 qofood ku dhimatay.
Basaaskii hore ee Ruushka, Sergei Skripal iyo gabadha uu dhalay, Yulia Skripal ( oo hadda bad qaba) waxaa 4tii March lagu sumeeyay Gaaska Sarin,magaalada Salisbury. Waxaa la qiyaasayaa in loo isticmaalay nooc ka mid ah Gaaska sunta ah ee magaciisu yahay ‘Novichoc’ laguna farsameeyo dalka Russiya.
Xogta Warbixinta Ururka ‘OPCW’ ( Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) ee Disember 2017kii, ilaa 31 Disember 2016, 4 dal ah oo qur ah ayaa haysatay hubka noocaan ah: Libiya, Ciraaq, Russiya iyo Maraykanka.
Bilowgii, dalalka caddeeyay haysashada hubka Kiimikada, xilligii ay ku soo biirayeen heshiiska OPCW, si loo burburiyo hubkaas, waxay tiradoodu dhammayd 8 dal. Kuwaas oo ay ku jiraan xitaa Albania, India, Suuriya iyo dal 4aad oo waligii codsan jiray in aan la xusin, laakiin loo aqoonsanyahay Kuuriyada Koofureed.
8daas dal waxay caddeeyeen 72,034 Tan oo hubkaas qaybtiisa (Category) 1 (oo ay ku jiraan Sarin iyo Mustard oo dagaalkii 1aad la isticmaalay), iyo Category 2 iyo 417,833 Tan oo Category 3 ah.
Jamciyadda ‘Arms Control Association’ waxay qeexaysaa in inta ugu badan qalabkaas uu lahaa dalka Russiya, dalka ku soo xigana yahay Maraykanka. Intii ugu badnayd qalabkaas oo la caddeeyay waxaa lagu burburiyay gacanta isla Ururka OPCW; sannadkii 2016kii waxaa la burburiyay in ka badan 2,000 oo Tan.
Xogta qiyaasaha ah ee ku xusan Warbixinta, boqolleyda hubka Kimikada ah ee la burburiyay waa 94% Category 1 (66,256 Tan), 84% Category 2 ( 1,495 Tan) iyo 100% Category 3 (417,833 Tan).
Suuriya, Albania, India iyo Kuuriyada Koofureed, wakhtigaan xaadirka ah ma haystaan hub kiimiko ah, laakiin Ciraaq waxaa jira haraa tiro yar oo qur ah. Nuxur ahaan, wali waxaa burburin u harsantahay oo qur ah hubka Libiya (tobaneeyo Tan), Russiya iyo Maraykanka.
Hubka Kiimikada ee Suuriya oo tiradiisu ahaa 1,308 Tan, lana caddeeyay xilligii ay ku soo biiraysay heshiiska OPCW, gabi ahaantiis waxaa la burburiyay 2016kii, sida Warbixinta Ururkaas oo 10% kormeerkoodii ka fuliyay Suuriya sannadkaas.
Laakiin baaritaannada OPCW samaysay waxaa lagu xaqiijiyay in ciidammada Suuriya isticmaaleen hub kiimiko ah ilaa bishii April 2017kii.
Ururka OPCW waa Urur Caalami ah oo kulmiya 192 dal oo mid kasta marka uu ku soo biirayo oggolaada heshiiska burburinta hubka kiimikada, 2 ilaa 10 sano gudahood, saxiixa ka dib.
Maraykanku wuxuu shaaca ka qaaday in uu burburinta hubkiisa oo idil samaynayo sannadka 2023ka gudihiisa, halka Israel oo ku soo biirtay 1993kii ayan waligeed marna ansixin heshiiska. Dalkii u dambeeyay oo ku soo biira Ururka wuxuu noqday Angola oo soo gashay sannadkii 2015kii.
Kuuriyada Woqooyi oo loo hasyto mas’uuliyadda khaarajantii, sannadkii 2017kii, Kim Jong-Nam oo la dhashay hoggaamiye Kim Jong-Un, waligeed xubin kama noqon Ururkaas.